FANDEFASANA MPIASA ANY IVELANY : Tra-tehaka ireo mpanondrana olona an-tsokosoko
Nahitam-bokany ny vela-pandrika nataon’ny polisy. 1er avril 2019
Olona telo, raim-pianakaviana iray sy ny vadiny ary vehivavy iray namany mivondrona ao anatina tambajotra mpanondran’olona an-tsokosoko mankany Arabie Saoudite sy Oman no vosambotra. Ny faran’ny herinandro lasa teo iny no nahatratrarana azy ireo.
Tovovavy roa avy any Andapa no nampanantenaina fa halefa any Arabie Saoudite hiasa. Araka ny fitantaran’izy ireo dia nakana vola mitentina roa tapitrisa Ariary isany avy izy ireo. Tsara lamina ny resaka sy ny fitaka natao azy ireo, lazaina fa halefa avy hatrany ary rehefa tonga any Arabie Saoudite dia hanana asa tsara sady tsara karama. Tsy araka ny nampanantenaina anefa ny zava-niseho.
Niainga avy any Andapa izy roa vavy ary najanona teto Antananarivo. Nolazain’ilay nitonona ho mpikarakara fa eto an-drenivohitra no iandrasana ny fiaingan’izy ireo mankany Arabie Saoudite. Niandry efa am-bolana maro anefa izy roa vavy mbola tsy lasa ihany. Voalaza fa mahita olana hambara hatrany ilay vehivavy nandray an-tanana ny fandefasana azy ireo.
Very an-javony ny volabe
Tsy vitan’izay fa rehefa naharitra ilay fiandrasana dia noroahina tao amin’ilay trano nivantanany teto Antananarivo izy roa vavy. Vokany, very an-javony ny volabe nalaina tamin’izy ireo izay nolazaina fa hikarakarana ny taratasy handehanany mankany ivelany. Tsy nipetra-potsiny ireo lasibatra nanoloana ny trangan-javatra nihatra tamin’izy ireo fa nametraka fitoriana tao amin’ny rantsan’ny polisim-pirenena miandraikitra ny fanadihadiana manokana sy ny ady amin’ny hosoka na ny “Service central d’enquête spécialisée et de lutte contre la fraude documentaire” eo anivon’ny Minisiteran’ny filaminam-bahoaka.
Avy hatrany dia nandeha ny fanadihadiana rehetra. Nataon’ny polisy hazalambo ilay ramatoa tompon’antoka tamin’ity raharaha fanondranan’olona an-tsokosoko ity. Rehefa nandeha ny fikarohana teny amin’ny trano fonenany etsy Ampefiloha-Ambodirano no nahatratrarana azy. Tratra niaraka taminy ihany koa ilay rangahy vadiny, izy ireo izay fantatra fa miray tsikombakomba amin’ny fanaovana ity asa ratsy ity. Rehefa natao ny fakana am-bavany azy mivady ireto dia nambarany fa manangona ankizy sy mikarakara ny pasipaoron’izy ireo fotsiny no ataony fa misy vehivavy namany hafa miandraikitra ny fanondranana.
Ny vela-pandrika indray no noentina nikarohana ity vehivavy ka teny amin’ny faritra 67ha iny indray no nahasamborana an’ilay vehivavy mpandefa ankizy any Arabie Saoudite. Ity farany izay niaiky fa asa fivelomany ny manondrana olona hiasa mankany Arabie Saoudite ary efa hatramin’ny taona 2016 no nanaovany izany. Marihina fa voararan’ny lalàna ny fandefasana ny vehivavy Malagasy hiasa any ivelany indrindra any amin’ireo tany arabo tsy manaja ny zon’olombelona. Enjehin’ny lalàna ary iharan’ny sazy henjana izay tratra manao izany.